Chatbots အမျိုးအစားများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက ၎င်းတို့ကို လိုအပ်လာရသည့် အကြောင်းရင်းများ
03 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 4
အရွယ်အစားနှင့် စက်လုံးနီးပါးရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် chatbots ကိုအသုံးပြုခြင်းမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးမှ၊ သင်သည် ဤ bot အမျိုးအစားနှင့်ပတ်သက်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အချက်အလက်အားလုံးကို သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Chatbots များသည် လုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်၊ ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်နှင့် ဝင်ငွေများ တိုးလာစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် B2C နှင့် B2B အပိုင်းများတွင် အညီအမျှ အသုံးဝင်လာပါသည်။ ဤဆောင်းပါးမှ၊ ကွဲပြားသော chatbots အမျိုးအစားများအပြင် ၎င်းတို့၏ အားကောင်းမှုနှင့် အားနည်းသည့်ဘက်များအကြောင်း သင်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤစာသားကိုဖတ်ပြီးနောက်၊ သင့်ကုမ္ပဏီသည် ထိုကဲ့သို့သော bot တစ်ခုကို ရယူလိုခြင်းရှိမရှိကို အသိဉာဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရပါမည်။
Chatbots ၏ အဓိက အားသာချက်များ
Chatbots များသည် တိုက်ရိုက်လူ့စကားပြောဆိုမှုများကို တုပသည်။ ဖောက်သည်များအား လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်များပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးခြင်းကဲ့သို့သော ရိုးရှင်းသော၊ ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကိုင်တွယ်ရန် ၎င်းတို့ကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရှုပ်ထွေးသော chatbots များသည် အောက်ပါနည်းပညာများကို အားကိုးနိုင်သည်-
သင်ယူရန်နှင့် တိုးတက်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် များပြားလှသော အချက်အလက်များစွာ လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် AI-powered bot တစ်ခုလိုအပ်ပါက၊ သင်သည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံ စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးသင့်သည်။
အရိုးရှင်းဆုံး ဘော့တ်များသည် အသုံးပြုသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို မခွဲခြားနိုင်ဘဲ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စမတ်ကျလာခြင်းမရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့အား ဒေတာများ ကျွေးမွေးရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အလွန်ဇာတ်ညွှန်းရေးထားပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော စကားဝိုင်းများကိုသာ ပံ့ပိုးနိုင်သည်။ No-code constructors များအကူအညီဖြင့် အရိုးရှင်းဆုံး chatbot များကို သင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
အောက်ပါ chatbots အမျိုးအစားများမှ သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်-
ဇာတ်ညွှန်းရေးထားသည် သို့မဟုတ် အမြန်ပြန်ကြားပါ။ အထက်အောက် ဆုံးဖြတ်ချက်သစ်ပင်များအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုသူ၏ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော မေးခွန်းအစုံကို ပေးဆောင်သည်၊ client သည် အချို့သောမေးခွန်းတစ်ခုကို နှိပ်လိုက်ပြီး bot မှ ၎င်းတို့အား အဖြေတစ်ခုပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ဖြေရှင်းချက်များသည် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ chatbot ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုန်ကျစရိတ်.
သော့ချက်စာလုံး အသိအမှတ်ပြုမှုအခြေခံ။ client သည် ထိုကဲ့သို့သော bot တွင် တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကို ရိုက်ထည့်နိုင်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် စာသားပါသော့ချက်စာလုံးများကို ရှာဖွေပြီး သက်ဆိုင်ရာအဖြေများကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစား၏ အဓိကချို့ယွင်းချက်မှာ ဘော့တ်များသည် မလိုအပ်သောမေးခွန်းများ သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲသော့ချက်စကားလုံးအသုံးပြုမှုကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် ရုန်းကန်ရနိုင်သည်။
စပ်သည်။ ဤသည်မှာ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစား နှစ်ခု၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် သော့ချက်စာလုံးများကို အားကိုးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော မေးခွန်းများမှ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဆက်စပ်မှု။ ဖောက်သည်တစ်ဦးစီနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို မှတ်မိရန် ၎င်းတို့သည် ML နှင့် AI ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် ထိုဒေတာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ စကားဝိုင်းစီးဆင်းမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အသံဖွင့်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အသံအကူများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် စကားပြောခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပြီး စာသားမှ စကားပြောသို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထိုသို့သော chatbots များသည် သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများအတိုင်း အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များစာရင်းပြုစုခြင်းကဲ့သို့သော တီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းများကို ရင်ဆိုင်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ chatbots များကို နိုင်ငံမဲ့ သို့မဟုတ် stateful အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ ယခင်အသုံးပြုသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ယခင် ဒိုင်ယာလော့ခ်များကို မမှတ်မိပါ။ နောက်တစ်ခုက အစောပိုင်းက တုံ့ပြန်မှုတွေအားလုံးကို မှတ်မိပြီး သူတို့ရဲ့ အပြုအမူကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပါ။
ကုမ္ပဏီများ chatbots များကို လေးစားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အား အောက်ပါ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စေရန် ခွင့်ပြုပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် တပြိုင်နက် စကားစမြည်ပြောဆိုပါ။
ဖောက်သည်သည် အချို့သောစာမျက်နှာသို့ လည်ပတ်ပြီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထံ ကမ်းလှမ်းချက်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် ထိုစကားဝိုင်းမှ အချက်အလက်ကို အသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဒိုင်ယာလော့ခ်တစ်ခုကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
လူသားအထောက်အကူပြု မန်နေဂျာများကို ငှားရမ်းခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း လိုအပ်ချက်များကို ဖယ်ရှားပြီး ၎င်းတို့အား လစာပေးခြင်း
လူ့အကြောင်းရင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပါ။
ဝန်ထမ်းများအား ဦးစားပေးအလုပ်များကို အာရုံစိုက်ခွင့်ပြုပါ။
ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် သုံးစွဲသူဒေတာကို စောင့်ကြည့်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။
ဘော့တ်များ၏ ဘာသာစကားမျိုးစုံပြောနိုင်မှုနှင့် အချိန်ဇုန်မခွဲခြားဘဲ သုံးစွဲသူ၏မေးမြန်းချက်များကို 24/7 ကိုင်တွယ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များသို့ အရွယ်အစားပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဦးဆောင်သူများကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပစ်မှတ် KPIs အောင်မြင်မှုရရှိရန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ chatbots များသည် သင့်အား ဦးဆောင်မျိုးဆက်၊ အရည်အချင်းနှင့် ပြုစုပျိုးထောင်မှုတို့တွင် ကူညီပေးပါမည်။ သင်၏ ဖောက်သည် အခြေစိုက် စခန်းကို ချဲ့ထွင်ပြီး သင်၏ ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကို မြှင့်တင် ပေးလိမ့်မည်။ သင့်ဖောက်သည်များသည် အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်သောကြောင့် သင် chatbots ကိုအသုံးပြုသည်ဟူသောအချက်ကို တန်ဖိုးထားသင့်သည်-
ဖောက်သည်များအား 24/7 ပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
စောင့်ဆိုင်းချိန်ကို လျှော့ချပြီး ချက်ချင်းအဖြေများ ပေးသည်။
client queries ၏ redirection ကို မြှင့်တင်ပါ။
လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုများကြောင့် စိတ်မသက်မသာခံစားရနိုင်သော ဖောက်သည်များ၏ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပါ။
ဖောက်သည်တစ်ဦးစီ၏ အတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
သင်၏ chatbot သို့ စိတ်ကြိုက်ဒြပ်စင်များကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးအစား၏ အားနည်းချက်များသည် အလွန်များပြားခြင်းမရှိပါ၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးဆွဲသူများသည် ၎င်းတို့အား တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကျော်လွှားရန် ကြိုးပမ်းမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယနေ့ chatbot အသုံးပြုသူများသည် အောက်ပါပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်သင့်သည်-
ဘော့တ်များသည် မပြည့်စုံသေးပါ။ ရှားရှားပါးပါး အခါသမယတွင် သူတို့သည် မှားယွင်းသော အဖြေများကို ပေးနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူသည် အမှားများ သို့မဟုတ် မှားယွင်းရိုက်နှိပ်ခြင်း၊ ဗန်းစကား သို့မဟုတ် အတိုကောက်အသုံးပြုပါက မက်ဆေ့ဂျ်ကို နားလည်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။
Chatbots များသည် လူသားတို့၏ ကျပန်းနှင့် အလိုလို လိုက်လျောညီထွေရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူသည် မေးခွန်းတစ်ခုဖြင့် စတင်နိုင်သော်လည်း ကွန်မန်းတစ်ခုသို့ အမြန်ပြောင်းနိုင်ပြီး bot သည် သင့်လျော်စွာ တုံ့ပြန်ရန် လိုအပ်သည်။
လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကို chatbots တွေနဲ့ မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Developer များသည် သုံးစွဲသူများအား ခိုင်မာသော လုံခြုံရေးအာမခံချက် ပေးသင့်ပြီး ဒေတာပေါက်ကြားမှုများ ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြသင့်သည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း chatbot တွေရဲ့ အားသာချက်တွေက သူတို့ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်ထက် သာလွန်ပါတယ်။.
ဤဆောင်းပါးသည် အသုံးဝင်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး ယခုအခါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် chatbots ၏အရေးပါပုံကို သင်ပိုမိုနားလည်လာပါပြီ။ Bots သည် လူသားပံ့ပိုးမှုမန်နေဂျာများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အစားထိုးနိုင်ပြီး ရိုးရှင်းပြီး ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင့်အဖွဲ့သားများသည် ၎င်းတို့ထံတက်ရောက်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်မီအထိ သင့်ဖောက်သည်များ စောင့်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဘော့တ်များသည် ဘာသာစကားမျိုးစုံပြောဆိုနိုင်သည်၊ ဖောက်သည်များ၏မေးမြန်းချက်များကို 24/7 စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ယခင်ကလူများနှင့် ၎င်းတို့၏ယခင်အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများမှ သင်ယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် chatbot တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါက၊ ၎င်းသည် သင့်အား သင့်ဖောက်သည်များ၏ အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ပေးပြီး နောက်ဆုံးတွင် သင့်ဝင်ငွေကို မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော သင့်မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများအတွက် အမိုက်စား ခရစ္စမတ်နည်းပညာလက်ဆောင်များ အိုင်ဒီယာ 12 ခု
နောက်တစ်ခု HyperX သည် USB မိုက်ခရိုဖုန်း တစ်သန်းကျော်ကို ပို့ဆောင်ပေးသည်။